Mari Inoshandiswa neZvapupu Inobva Kupi?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Tinowana Kupi Mari Yekuita Basa Redu Rekuparidza?
Gore negore tinoprinda nekuparadzira mazana emamiriyoni emaBhaibheri nezvinyorwa zvinoritsanangura. Tinovaka mahofisi edu munyika yose uye tine michina yokuprinda mabhuku munyika dzakasiyana-siyana. Zviuru zvakawanda zveungano zvinonamatira muzvivako zvakanaka asi zvisingashamisire zvinonzi Dzimba dzoUmambo. Mari yekushandisa pane zvose izvi inobva kupi?
Basa redu rinotsigirwa nemipiro inobviswa nevanhu pasina kumanikidzwa. (2 VaKorinde 9:7) Muna 1879, Nharireyomurindi yechipiri kubva pane yakatanga kubudiswa yakati: “Tinodavira kuti ‘Zion’s Watch Tower’ [sekudanwa kwayaiitwa mazuva iwayo] inotsigirwa naJEHOVHA, saka haisi kuzoita zvokupemha kana kuti kukumbira vanhu kuti vaitsigire.” Hatina kumbobvira tachinja panyaya iyoyo.
Mipiro inenge yabviswa inotumirwa kumahofisi edu emapazi kana kuti inokandwa mubhokisi remipiro rinowanika muImba yoUmambo imwe neimwe. Asi hatimbofi takabvisa chegumi kana kukumbira vanhu mari kana kuvachaja mari yebasa redu kana kuti mabhuku edu. Hatibhadharwe kuti tinoparidzira vanhu, tidzidzise muungano kana kuti patinobatsira pakuvaka nzvimbo dzokunamatira. Jesu akatotaura kuti: “Makagamuchira pachena, ipai pachena.” (Mateu 10:8) Vashumiri vose vanoshanda pamahofisi edu ari munyika dzakasiyana-siyana nepamahofisi edu makuru kusanganisira vaya vari muDare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha, havabhadharwe.
“Kungofanana nezvose zvinoitwa neZvapupu zvaJehovha, kubvisa mipiro haisi nyaya yekumanikidzwa, asi munhu mumwe nemumwe anozvisarudzira oga mari yaanoda kupa paadira.”—European Court of Human Rights, 2011
Mari yemupiro inoshandiswawo pakuyamura vanhu munguva dzenjodzi. VaKristu vepakutanga vakafara chaizvo pavakayamura vanhu vaitambudzika. (VaRoma 15:26) Nesuwo tinobatsira vaya vanenge vawirwa nenjodzi patinovavakira dzimba dzavo nepokunamatira uye patinovapa zvokudya, zvokupfeka nekuvarapisa.
Ona vhidhiyo yakanzi Philippines Typhoon—Faith Conquers Adversity iri pawww.jw.org. (Enda pakanzi ABOUT US > ACTIVITIES)
Zvapupu zvaJehovha Zvinowana Kupi Mari Yekuita Basa Rekuparidza?